Imveliso ye-pH kunye ne-ORP yemitha abavelisi-China iMveliso ye-pH kunye ne-ORP yemitha yeemitha kunye nabaxhasi
Imitha ye-pH kunye ne-ORP yeMitha
I-PHG-3081 ye-PH yemitha
I-PHG-3081 yemitha ye-pH yemitha sisizukulwana sethu samva sesixhobo esisekwe kwimicroprocessor, ngesiboniso sesiNgesi, ukusebenza kwemenyu, ukukrelekrele okuphezulu, imisebenzi emininzi, ukusebenza komlinganiso ophezulu, ukulungelelaniswa kwendalo kunye nezinye izinto. Sisixhobo esomeleleyo esisebenza ngokuqhubekayo kwi-intanethi, esidityaniswa nesenzi kunye nemitha yesibini. Unokuxhotyiswa ngee-electrode ezidityanisiweyo okanye ezimbini zokuhlangabezana neziza ezahlukeneyo. Ingasetyenziselwa ngokubanzi ukubek'esweni ngokuqhubekayo kwexabiso le-PH yamandla ashushu, isichumisi semichiza, isinyithi, ukhuselo lokusingqongileyo, amayeza, amachiza, ukutya namanzi kunye nesinye isisombululo.
I-PHG-2091 ye-PH yeMitha
I-PHG-2091 ye-intanethi ye-PH yemitha yimitha echanekileyo yokulinganisa ixabiso le-PH lesisombululo. Ngemisebenzi epheleleyo, ukusebenza okuzinzileyo, ukusebenza ngokulula kunye nezinye izibonelelo, zizixhobo ezifanelekileyo zokulinganisa umzi mveliso kunye nolawulo lwexabiso le-PH. Ii-electrode ezahlukeneyo ze-PH zinokusetyenziswa kwimitha ye-PHG-2091 ye-intanethi ye-PH yemitha.
I-PHG-2081X ye-Industrial PH kunye ne-ORP yeMitha
Izixhobo zisetyenziselwa ukulinganisa kwimizi-mveliso ngamaqondo obushushu kunye ne-PH / ORP, njengonyango lwamanzi amdaka, ukubeka iliso kwindalo esingqongileyo, ukubila, ikhemesti, inkqubo yokutya yokuvelisa imveliso, njl.
I-PHG-2081S ye-PH kunye ne-ORP yeMitha
I-ORP-2096 Imitha yokuNcitshiswa koNgcino loshishino (ORP)
Imitha ye-ORP-2096 ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Orp yimitha yokulinganisa ngokuchanekileyo kwimilinganiselo ye-ORP. Ngemisebenzi epheleleyo, ukusebenza okuzinzileyo, ukusebenza okulula kunye nezinye izibonelelo, zizixhobo ezifanelekileyo zokulinganisa umzi mveliso kunye nolawulo lwexabiso le-ORP. Ii-electrode ezahlukeneyo ze-ORP zinokusetyenziswa kuthotho lwezixhobo ze-ORP-2096.